Olee otú Gbanwee si Old Windows na ekwentị New Windows Phone
Ịmafe a ọhụrụ ekwentị mgbe niile bụ na-akpali akpali. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ịmafe a smart ekwentị na a dị iche iche OS ma ọ bụ ọbụna nsụgharị dị iche iche nke otu OS, i nwere ike na-achọ ịmata otú ị pụrụ isi nyefee niile data mfe. Ị na-achọghị ka ida data site na ekwentị gị, karịsịa, gị kọntaktị, ozi, mgbasa ozi faịlụ, kalenda, na ngwa.
1. Nyefee data iji Nyefee My Data ngwa
2. Nyefee data site na iji wuru na-Windows atụmatụ
1. Nyefee data iji Wondershare Mobiletrans ke kiet ke otu click
Ị nwere ike iji software dị ka Nyefee My Data. Ọ bụ free software iji, na e mere ya na-akwado transfer n'etiti abụọ windows ekwentị. I nwekwara ike iji na-wuru atụmatụ nke Windows ekwentị na-esi gị niile dị mkpa data na ekwentị gị. Ma ụzọ ndị free na ike n'ụzọ dị irè nyefee data si gị ochie windows ekwentị ọhụrụ windows ekwentị.
Nzọụkwụ nyefee data si ochie windows ekwentị ọhụrụ windows ekwentị n'iji Nyefee My Data ngwa
Ị nwere ike iwunye nyefee m Data ngwa si ụlọ ahịa. Ị ga-wụnye ya na ma igwe dị ka nke a na-eji ngwa mbipụta data si ochie ekwentị ọhụrụ ekwentị site Bluetooth.
Chọrọ n'ihi na usoro a:
Usoro a bụ bara uru n'ihi na ụdị nile nke data. Ọ ga-abụ kọntaktị, foto, videos, music, wdg, ọ ga-mere mfe. Otú ọ dị, ị ga-ebufe data aka site na otu ọzọ si nchekwa draịva.
1. nyefee m Data ngwa
2. Bluetooth Njikọta maka ma igwe
1. On gị ochie ekwentị eme n'aka, Bluetooth bụ na ọ bụ discoverable.
2. ẹkedori ngwa gị ọhụrụ Windows ekwentị. On n'ụlọ ihuenyo, dị nnọọ enweta na-anọgide na.
3. Ọ ga iṅomi maka na agadi ekwentị na ị chọrọ ejikọ na. Ozugbo ochie ekwentị ahụrụ, enweta na ya jikọọ.
4. Ugbu a, ọ ga iṅomi maka ụdị data ochie ekwentị na-enye ohere nyefee. Ozugbo scanned, jide n'aka na ọ na-ticked. Ọ ga-egosikwa ego nke oge ọ ga-ewe iji mee ka nyefe. Ụdị data nwere ike zigara na-adabere na gị ochie ekwentị. Ụfọdụ igwe ekwe naanị kọntaktị, na ụfọdụ na-enye ohere ozi ederede na foto a kpọfere. Ugbu a, dị nnọọ enweta na mmalite ime ka nyefe.
5. Next ihuenyo ga-egosi ọnọdụ nke transfer na-eche maka ya mezue nyefe.
Gị data ugbu a kpọfere ekwentị gị, dị nnọọ ego nwoke ngwa iji gosi ya.
Usoro a bụ mfe dị ka ndị gị na-achọ naanị ngwa gị ọhụrụ ekwentị.
Ngwa ngwa synchronizes data gị ọhụrụ ekwentị. E nwere bụghị ọtụtụ mgbalị e tinyere na ya.
Ọ dịghị mkpa na maka internet dị ka ọ na-eji Bluetooth Njikọta.
Ọ na-enye ohere mmachi ụdị data transfer dị ka kọntaktị, ozi ederede, na foto. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụ naanị na kọntaktị.
Bluetooth Njikọta nwere ike na-oge ụfọdụ nyefee ma ọ bụrụ na data bụ nnukwu.
Nzọụkwụ nyefee data si ochie windows ekwentị ọhụrụ windows ekwentị n'iji wuru na-Windows atụmatụ
Mgbe ị zụrụ ọhụrụ na ekwentị na ihe mbụ ị na-eme bụ ka o guzo ọtọ ekwentị gị. Mgbe ị na-ịgbanwee na ekwentị gị maka oge mbụ, ị ga-abanye, oge, ụbọchị, ozi nbanye na ọtụtụ ndị ọzọ. N'oge na usoro ị nwere otu nhọrọ iji weghachi si gị ochie ekwentị.
Achọ Wi-Fi Njikọta
Old ekwentị nbanye nzere maka iche iche akaụntụ.
1. On mbụ mgba ọkụ na ekwentị gị, ị ga-aga site a Mbugharị usoro nke na-agụnye Wi-Fi njikọ, oge mpaghara wdg dị nnọọ tinye ọ bụla zuru ezu. Mgbe ị na-eru na nzọụkwụ ebe ị na-jụrụ ịbanye akaụntụ Microsoft nzere, tinye onye ị na-eji na gị ochie ekwentị.
2. Nke a nzọụkwụ dị mkpa nzọụkwụ. Ozugbo ị na-aka na. Ị ga-enwe ndepụta nke ọhụrụ windows ekwentị ndabere faịlụ site na gị ochie ekwentị. Họrọ kasị nso-nso otu ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na onye na enweta na-esonụ.
3. Next ihuenyo ga-ajụ maka nkwenye nke eweghachite. Ma usoro a ga-ejikọ na site Wi-Fi ma ọ bụ data atụmatụ. Dị nnọọ gosi usoro site na ịme ọpịpị na-esote.
4. Nke a na ihuenyo egosi ọganihu mmanya nke usoro. Ekwe ka ọ na wuchaa.
5. Mgbe usoro a ị ga-banye n'ime ụfọdụ nke akaụntụ dị ka Facebook, twitter na ndị ọzọ. Dị na-eji otu nzere ị na-eji ya na gị na ochie ekwentị.
6. Ozugbo adian usoro zuru ezu, nwere ike ị chọrọ iji weghachi gị ochie ekwentị. Gaa na ụlọ ahịa na-etolite na menu họrọ Downloads. A na-egosi na ngwa ọdịnala na ị ebudatara na gị ochie ekwentị. All ngwa Nwela arụnyere na ekwentị gị.
7. Next ihuenyo ga-egosi na download ihuenyo nke na-egosi na-enwe ọganihu nke ngwa ebudatara na ekwentị gị.
Usoro a na-eme ga-esi kasị nke data na ekwentị gị, mgbe mbụ ị mgba ọkụ na ọhụrụ gị windows ekwentị. Ọ dịghị achọ ka ihe ọ bụla ngwa ma ọ bụ pc nyefe, niile ị na-achọ bụ Wi-Fi Njikọta.
Ọ na-achọ Wi-Fi ibudata data na ekwentị gị.
Ngwa ma ọ bụ oku na ndekọ na-apụghị kpọfere; ha na-arụnyere ọhụrụ na ọhụrụ gị na ekwentị.
Ị weghachi ị ekwentị ochie ekwentị mgbe ị ịgbanwee na ọhụrụ gị na ekwentị maka oge mbụ.
Adịghị achọ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ software pc transfer Filiks. Naanị net Njikọta a chọrọ.
Ihe niile synced ruo n'ókè gị ochie ekwentị bụ na ihe niile ahụ data.
Nzọụkwụ nyefee data si ochie windows ekwentị ọhụrụ windows ekwentị n'iji Wondershare Mobiletrans
Nzọụkwụ 1: Open Wondershare Mobiletrans na kọmputa gị na jikọọ ma Windows igwe na kọmputa. Mobiletrans ga recogize ma ngwaọrụ na sekọnd ole na ole.
Nzọụkwụ 2: Wondershare Mobiletrans pụrụ ịkwado nyefee Photos, Videos, Music faịlụ ozugbo n'etiti abụọ windows igwe. Họrọ faịlụ na ụdị mkpa ka ị nyefee na pịa Malite Nyefee. The faịlụ ga-agafere lekwasịrị ekwentị na a nkeji ole na ole. Biko Akwụpụla ma ngwaọrụ n'oge usoro.
PS. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee kọntaktị, biko ndabere kọntaktị na na OneDrive na ekwentị gị. Pịa Weghachi si Backups on Mobiletrans iji weghachi kọntaktị na iche na ekwentị.
Ọ dị mfe nyefee data si a ochie Windows OS ka onye ọhụrụ. Mgbe Windows eruwo a ogologo ụzọ ebe Windows maka smart igwe na-akpa ẹkenam, e nwere ka ezi mmekọrịta ike n'etiti abụọ na ị na-adịghị na-echegbu onwe.
Ma ụzọ nwere onwe ha positives na negatives, na-eji onye na suut gị chọrọ ihe kasị mma.
> Resource> Windows> Olee ka ịgbanwee si Old Windows na ekwentị New Windows Phone